Mumps ပသိရောင်ရောဂါ - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
၁။ လိင် မိန်းကလေး။ အသက် ၅ နှစ်။ ကလေး ဗယ်ဘက်ပါးချိတ် လေးရက်ခန့် သူ့အလိုလိုရောင်နေပါသည် ယနေ့ ညာက် ထပ်ရောင်ပါသည်။ လူကြီးတချို့က မိုနာ ဟုပြောပါသည် ခုမှကြားဘူးပါသည်။ ကလေးအလွန်နာနေပါသည်။ ဆရာ ညွှန်ကြားပေးပါခင်ဗျာ။
ပို့ပေးတဲ့ ဓါတ်ပုံမှာတော့ ညာဖက်ပါးဖြစ်နေတယ်။
၂။ ဆရာ သမီးလေးက ၅ နှစ်ပါ။ ဖျားပြီး နားအောက်နားက နှစ်ဖက်လုံး နာပြီးယောင်နေလို့ ဆေးခန်းပြတာ ဆရာဝန်က ပါးချိတ်ယောင်တာ ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားဘူးလားလို့မေးတယ်ဆရာ။ ဒေသန္တရဆေးတွေတော့ အကုန်ထိုးပါတယ်ဆရာ။ အပြင်ဆေးတွေတော့ မထိုးရသေးပါဘူးဆရာ။ သမီးလေး ဖြစ်နေတာ မကြည့်ရက်ဘူးဆရာ ။ ဆေးခန်းက Ammoxilim 250နဲ့ Biogesic ပဲ ပေးတယ်ဆရာ။ သမီးလေး မသက်သာဘူး။ မျက်နှာမှာလဲ အပူတွေကန်သလို အဖုနီလေးတွေ ပေါက်နေတယ်ဆရာ။ အစားလည်း သိပ်မစားနိုင်ဘူးဆရာ။ အဲဒါ ဘယ်လို ကာကွယ်ကုသရမလဲ ဆိုတာ ဖြေကြားပေးပါဆရာရှင့်။ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်။
ပသိရောင်ရောဂါဟာ ကူးစက်မြန် ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ဖြစ်တယ်။ အသက်ရှူလမ်းကနေ ပိုးပါနေတဲ့အမှုံအမွှားလေးတွေကို ရှူမိလို့ ကူးစက်တယ်။ တခါတလေမှာ အမှုံအမွှားတွေက အိပ်ယာ၊ အသုံးအဆောင်တွေပေါ်တင်နေတာက ကိုယ်ထဲ ဝင်လို့လဲကူးမယ်။ ချောင်းဆိုး၊ နှာချေရာကနေကူးမယ်။ တံတွေးကနေလဲ ကူးမယ်။ အစာအတူစားရာကနေလဲ ကူးနိုင်သေးတယ်။ ကိုယ်ထဲကနေထွက်လာပြီးနောက်လဲ ဗိုင်းရပ်စ်ကရှင်နေနိုင်သေးလို့ဖြစ်တယ်။ အများအားဖြင့် တက်စေ့မရောင်ခင်ကနေ တက်စေ့ရောင်ပြီး ၅ ရက်ကြာအထိ ကူးစက်နိုင်တယ်။ ကလေးတွေမှာဖြစ်တာက နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တာနည်းတယ်။
1. Mumps ပသိရောင်ရောဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/mumps.html
2. Pregnancy and Rubella ကိုယ်ဝန် နှင့် ဂျာမန်-ဝက်သက် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/pregnancy-and-rubella.html
3. Parotitis တံတွေးထွက်အိတ်ရောင်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2017/03/parotitis.html
4. Rubella (ရူဘဲလား) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/rubella.html ကိုတွဲဖတ်နိုင်ပါတယ်။